The Applications are being reviewed by the Selection Committee! – Impact Hub Yangon
“Preparation Program for Exportation and European Market Readiness” ကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ အချိန်ပေးလျှောက်ထားခဲ့ကြသူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တင်သွင်းလာသောလျှောက်လွှာများအားလုံးကို အကဲဖြတ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းကာ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
အကဲဖြတ်ကော်မတီတွင် EuroCham Myanmar၊ Delegation of German Industry & Commerce in Myanmar နှင့် ပို့ကုန်တင်ပို့ခြင်းနှင့်ပက်သက်တဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦး၊ FNF Myanmar၊ Impact Hub Yangon မှ အကဲဖြတ်သူများ အဖြစ်ပါဝင်ကူညီပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးချယ်ခံရသူများအား အုပ်စု (၂) စုခွဲကာ ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပြီး အုပ်စုတစ်စုစီတွင် လုပ်ငန်း (၂၅)ခု ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားလျှောက်ထားသူများ များပြားလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့် စုစုပေါင်းလုပ်ငန်း (၅၀) အား ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးချယ်ခံရသူများအား လာမဲ့အပတ်တွင် အီးမေးလ်နှင့် ဖုန်းမှတဆင့် ဆက်သွယ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် စောင့်မျှော်ကြပါရန် တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
Thank you very much for taking interest and submitting the applications to the “Preparation Program for Exportation and European Market Readiness”.
All the applications are currently being reviewed together with the support of our selection committee members: EuroCham Myanmar, Delegation of German Industry & Commerce in Myanmar, an Exportation Expert, FNF Myanmar and Impact Hub Yangon.
We will be recruiting 25 enterprises for each cohort and there will beatotal of2cohorts! Total of 50 enterprises will be selected due to the high interest of the participants.
We will be contacting via email and phone to the chosen participants in the coming week.
So, please stay tuned for the results.
Previous Open for Applications | Falling Walls Lab Myanmar
Next Cartier Women’s Initiative | Calling Women Entrepreneurs, Innovators and Social Change Makers!